Muhaditha Awards 2010 & 2011 | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Qofka Muslimka ah ee wax wanaagsan sameeya waxaa fiican in loo mahad celiyo oo weliba lagu amaano wanaaga uu Islaamka iyo ummadaba u qabtay. Bloggan Muhaditha hadafkiisu waxuu ahaa welina yahay in Sunnada Rasuulka sallalaahu calayhi wasallam loogu adeego, iyadoon cid binu aadam ahna laga sugayn abaalmarin iyo dhaqaale toona. Hadaba walaalooyin waxaa jira gacan dheer ka gaystay Bloggan maqaalada kujira. Walaalahaas oo inay diinta u adeegaan kali ah ay ka tahay (laa uzakii calallaahi axad). Sidaa daraadeed waxaan Blogga muhaditha kusoo biiriyay barnaamij aan u bixiyay “Muhaditha Awards” oo marka soomali loo turjumo noqonaya “Muxaditha -abaalgudka ay bixiso” . Ujeedadanu waxaa weeye in aan xusso walaalaha sida quruxda badan oga muuqda Blogga.
Walaalooyin badan baa runtii maqaalo soo qora kuligoodna waxay iga mudanyahiin mahad iyo ducco. Waxaana Ilaahay swt ka baryayaa inuusan ka xarimin ajarkooda maalinka Qiyaamah. Abaalmarintani waa tii koobaad ee ay bixiso Muhathia wordpress , sidaa daraadeed waxay isku soo dartay 2010 iyo 2011 . Waxayna siinaysaa Laba qof oo runtii bloggan wax weyn u taray, Ilaahay swt ayaa fadhliga leh kadibna labadan qof. Abaal marintu waa laba wax. 1) The most active persons = Waxaan siinaynaa dadka ogu firfircoonaa sanadkan. 2) Author with the most articles= waxaan siinaynaa qoraaga ogu maqaalo badan Blogga sanadkan. The Most Active Persons 2010 & 2011.
Author with the most articles .
Najma Saciid < Waxayna qortay dhawr iyo toban maqaal. Ilaahay swt waxaan ka barayaayaa labadoodaba inuu miizaanka xasanaatka usaaro. Waxaana leeyahay halkaa kasii wada dadaalka. Wallaacu aclaa wa axkam
from → Muhaditha Awards 2010 & 2011
← Qaabka Xadiiska loo xambaaro iyo sida loo sii weriyo!
Dhahabiyul casr- Almuxadith Cabduraxmaan Almacaalimi →
Nuur inqorane Al somali permalink	November 17, 2012 11:46 pm	Masha’allaaah )